ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဒီမိုကရေစီနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အမျိုးသမီးကွန်ရက် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်နော်အုန်းလှကို အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ် (ရုပ်သံ)
ဒီမိုကရေစီနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အမျိုးသမီးကွန်ရက် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်နော်အုန်းလှကို အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ် (ရုပ်သံ)
လက်ပံတောင်းတောင်အရေးဆောင်ရွက်သူ ဒေါ်နော်အုန်းလှကို အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်ခဲ့ (ရုပ်သံ)
မြန်မာပြည်ရဲ. နိုင်ငံရေးကအများကြီး တိုးတက်လာပါပြီ ၊
အရင်က အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြရင် ထောင်ဒဏ်
(၆၅) နှစ်တွေ၊ ဘာတွေနဲ. ။
.. အခု ဒေါ်နော်အုံးလှ တို.ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတာ (၂)နှစ် ဘဲကျတာဆိုတော့
.. လက်ရှိအစိုးရရဲ. ပြည်သူတွေအပေါ် ထောက်ထားညှာတာ
မှုကတော့ လေးစားဘွယ်ရာတကား ။။
သူက ၀မ်ပေါင်ကုပ္မဏီ ကိုထောက်ခံပါတယ် လို.သာ
အော်ပြီးဆန္ဒပြရင် ထောင်ကျစရာမရှိဘူး ။
- - လွှတ်တော်အတွင်း
- - တရှိုက်မက်မက်
- - တမှေးအိပ်ကာ
- - ထိုင်ခုံခင်မင်
- - တေမိ စိတ်ဝင်
- - စိတ်ပျော်ရွှင်
- - ပြည်သူ.ကိုယ်စား
- - အမတ်များ .... ကျမ္မာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ ။